‘ऐश्वर्य’ राम्रो कि रमेशको क्रेज ? - Experience Best News from Nepal
‘ऐश्वर्य’ राम्रो कि रमेशको क्रेज ?
प्रकाशित मिति : सोमवार, कार्तिक १३, २०७४
काठमाडौं । मेहेनतका साथ चलचित्र बनाउने हो भने दर्शकले हेर्छन् भन्ने उदाहरण सायद केहि हदसम्म हाल प्रदर्शित चलचित्र ऐश्वर्यले प्रमाणित गरेको छ । गुणस्तरीय फिल्म बनाउने हो बजारको समस्या छैन भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । साविकको शुक्रबार चल्ने गरेको नयाँ चलचित्रको प्रदर्शनको समय नै एकदिन अघि सारेर छठ पर्वको दिन बिहिबार देखि देशभर प्रदर्शनमा आएको चलचित्रले रिलिज भएको तिन दिनमै आफ्नो लगानी सुरक्षित गरेको समाचार बाहिरिएका छन् । निर्माण पक्षको भनाईलाई आधार मान्दा ऐश्वर्य ले पहिलो दिन करिब ४८ लाख, शुक्रबार ५६ लाख बराबर र शनिबार करिब ८० लाख बराबरको ग्रस कलेक्शन गरेको छ ।
लामो समय अमेरिका बसेर नेपाल फर्किएका अभिनेता रमेश उप्रेतीले ‘रिस्क’ मोलेरै मन खुलाएरै चलचित्रमा लगानी गरेका छन् । रमेशको कमब्याकसँगै उनको आगामी दिनमा चलचित्रप्रति कस्तो दृष्टिकोण राखेर काम गर्ने त्यो त उनको कामले नै निर्धारण गर्ला ।
तर, आफ्नो चलचित्रको प्रशंसाबाट हौसिएका उनका सामु भने अब यसलाई निरन्तरा दिने भन्ने चुनौती रहनेछ । चलचित्र राम्रो भएपछि दर्शकको साथ पाउनु नौलो कुरा भएन । कतिपय चलचित्र राम्रो भएर पनि नचलेका उदाहरणहरु छन् भने कलाकार राम्रो भए पनि चलचित्र राम्रो बन्न नसक्दा नचलेका त थुप्रै उदाहरणहरु छन् । हुनत रमेश उप्रेती चलचित्र नचलेर विदेश पलायन भएका अभिनेता होईनन् । तर, उनी फर्किएसँगै अभिनय गरेको ब्रासलेट दर्शकले उति रुचाएनन् । अब उनका सामु एउटा राम्रो चलचित्र पस्किसकेपछि अब दर्शकको आशा भने त्यही प्रकारको हुन्छ, यसलाई न्याय गर्ने जिम्मेवारी सायद अब उनकै हुनेछ ।
रमेश उप्रेती नै प्रस्तुतकर्ता रहेको चलचित्र रुचाइृनुमा कलाकारहरुको अभिनय र यसको भिज्युअल पार्ट पनि हो । प्रशान्त ताम्राकार, दीपिका प्रसाई, केकी अधिकारी, निर्मल शर्मा, अर्जुन श्रेष्ठ, केशव भट्टराई, विकास खतिवडा लगायतका कलाकारहरुले आफ्नो भूमिकामा गरेको अभिनय पनि यसका सु्न्दर पक्ष हुन् । समग्रमा भन्ने हो भने रमेशको पुनरागमनसँगै उनको अभिनय र चलचित्रको प्रस्तुती दुवैका हिसाबले चलचित्र राम्रो बनेको छ ।
एउटा कलाकारले विदेशमा गरेको मेहेनतलाई नेपालमा लगानी गरेर राम्रो चलचित्र दिन सक्नु पनि तारिफयोग्य कुरा हो । आफ्नो कमब्याक चलचित्र भन्न रुचाएका रमेशले साँच्चै नै कमब्याक गरेका छन्, यसैगरि निरन्तरता दिए उनको स्टारडम चुलिँदै जानेछ ।
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा कामुक महिला ! जान्नुहोस् उनीहरुको बारेमा
भोलीबाट प्रसारणमा ‘दी कपिल शर्मा शो’ !! टिजर सार्बजनिक